आ.व.२०७८/०७९ को बजेट बारे नीजि क्षेत्रको प्रतिक्रिया « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
आ.व.२०७८/०७९ को बजेट बारे नीजि क्षेत्रको प्रतिक्रिया
काठमाडौँ, १६ जेठ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आ.व. २०७८÷०७९को बजेटले नीजि क्षेत्रको अधिकांश सुझावलाई समेटेको बताउनुभएको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बजेटले नीजि क्षेत्रको सुझावहरुलाई समेटेको भन्दै कार्यान्वयन हुनसके यो बजेटलाई नीजि क्षेत्रले सकारात्मक रुपमा लिने बताउनुभयो । अघिल्लो वर्षमा केही कमी कमजोरीहरु देखिएको भन्दै उहाँले बजेटमा उल्लेख भएका कुराहरुलाई मौद्रिक नीतिमा पनि समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने उहाले बताउनुभयो । साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटनको क्षेत्रमा पनि बजेट सकारात्मक रहेको उहाँको भनाई छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दिपक मलहोत्राले बजेट कार्यान्वयन हुन सकेमा यस बजेटमा कुनै कैफियत नदेखेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण राजनीतिक नेतृत्व अल्मल्लिएको अवस्था भएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो । बजेटले सबै कुरा समेटेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफुहरुको अधिकांश माग सम्बोधन भएको बताउनुभयो ।
ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल(टान) का अध्यक्ष खुम सुवेदीले पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित साना तथा मझौला व्यवसायीले तत्कालै ऋणको व्यवस्था खोजेको भएपनि बजेट मार्फत् सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । यद्यपी, भ्याट छुट र पर्यटकिय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने कुरा समेटिनु सकारात्मक भएको उहाँको टिप्पणी छ । आफुहरु बजेट कार्यान्वयनको पखाईमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले जलविद्युतको लागि बजेटमा कुनै आकर्षक योजना नआएको बताउनुभयो । विद्युत खपत कति बढाउने भन्दापनि विद्युत अब चाहिँदैन भन्ने सरकाले सोच राखेको उहाँको भनाई छ । आफुहरुको माग अनुसार भ्याट फिर्ताको कुरा सम्बोधन नभएको बताउनुभयो । सर्बे लाइसेन्स नविकरण गर्न लाग्ने महशुल छुट दिने र समस्याग्रस्त आयोजनालाई सम्बोधन गर्ने कुरा बजेटले गर्न नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । आ.व. २०७८/०७९ को बजेटले विद्युत व्यापारमा विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकारलाई तोडेर नीजि क्षेत्रलाई पनि बाटो खुला गरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कम्युटर एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष नवराज कुँवरले बजेटले सुचना प्रविधिको विकासको निम्ति ठोस विषय नल्याएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । सुचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायी निराश बनेको उहाँले बताउनुभयो । इन्टरनेटको महशुल घटाउनुपर्ने, अप्टिकल फाइबर ल्याउँदा राजस्व घटाउनुपर्ने, सात प्रदेशमा आइटी पार्कको अवधारणा, नेपालमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिने र सुचना प्रविधिका सामग्रीहरुका भन्सार रेटमा परिवर्तन गर्ने लगायतका कुराहरु बजेटमा नपर्नु दुखद भएको उहाँको टिप्पणी छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश सिंहले अघिल्लै वर्षको बजेटलाई निरन्तरता दिईएको बताउनुभयो । आफुहरुले कोभिड अवधिभरको कर छुट र बैंकको व्याज छुट हुनुपर्ने माग राखिएको भएपनि सम्बोधन नभएको उहाँले बताउनुभयो । कतिपय कुराहरु समावेश भएको भएपनि कार्यान्वयन प्रक्रिया निकै नै जटिल हुने गरेका कारण लाभान्वित हुन कठिन हुने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
आफुहरुले उठाएको महिला कर्जाको कुरा बजेटले नसमेटेको उहाँले बताउनुभयो । समग्रमा साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीका लागि बजेट सन्तोषजनक नै रहेको कार्यबाहक अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।